Abdisalaan Cadaay oo shalay dhaawac uga maqnaa kulankii Viking gurigeeda looga badiyay - NorSom News
Kooxda Viking ee ka dhisan magaalada Stavanger ayaa shalay guuldaro kala kulantay Brann oo sanadkan kasoo laabatay horyaalka labaad ee wadanka. Brann ayaa goolka kali ah ee ciyaarta lakala dhaliyay la timid daqiiqadii 90-aad.Viking oo martii loo ahaa ayaa awoodi weyday in ay soo gudo goolkaas laga dhaliyay xiliga dhimashada.
Abdisalaam Ibrahim Cadaay oo ka tirsan kooxda koowaad ee Viking ayaa ciyaarta uga maqnaa dhaawac kasoo gaaray kulankii hore. Cadaay oo sanadkan bilowgiisa kusoo noqday Norwey, kadib sanado dhowr ah oo isku badalayay naadiyo kala duwan oo ka ciyaara qaarada yurub, ayaa hada heshiis sadex sano ah kula jooga kooxda viking. Kana mid ah laacibada muhiimka ee kooxda. Kooxda Viking ayaa ku jirta kaalinta 7-aad, waxa ayna 4 dhibcood ka hooseysaa kooxda haysa hogaanka ee Odds ballklubb
Previous articleWasiirkii shaqada Norwey oo shaqo la,aan weyn haysato.
Next articleSi aad ugu dacwaato qof famili ah waa inaad shaqaysaa 305.200 sanadkii